Khilaafka ka dhashay maamuuska madaxweyneyaashii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida – Bulsho News
Khilaafka ka dhashay maamuuska madaxweyneyaashii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida
Xigashada Sawirka, ERAR TV
Khadar Macalin Cali- Madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya
Qaar ka mid ah madaxdii soo martay Dowlda Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay in laga qaatay hanti ku lahaayeen halkaas isla markaana aysan helin wax maamuus ah oo ku aadan xuquuqdooda.
Waxay ku eedeeyeen xukuumadda inay ka dambeyso burburinta guryahooda iyo in la dhaco dhulkii ay ku lahaayeen Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Khadar Macalin Cali oo ah madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida oo wareysi siinayay warbaahinta maxaliga ah, gaar ahaan Erer Tv ayaa ku eedeeyay xukuumadda in aanay siin xuquuqdii iyo maamuskii ay mudnaayeen.
“Waxaa jira sharci la ansixiyay oo dhigaya in aan helno guriga, nolosha sida deegaanada kale ee deriska la nahay ee Itoobiya, waxaana ka codsanay madaxweynaha in arrintaa uu inoo dhaqangeliyo toddobaad ii qabta buu yiri…halkii bey taalla”
Khadar ayaa ka codsaday madaxweyne Mustafe in uu ilaaliyo sharciga isla markaana uu xaqiijiyo caddaaladda.
“Magdhaw baa la idin ka siinayaa guryihii la idin ka dumiyay, wax ka hirgalay ma jiro”
Dhanka kale, madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ka dhawaajiyay in sharciga dhigayo maamuska iyo xaquuqda madaxdii hore wax u ogolaanayo oo kaliya ah madaxdii soo martay deegaanka wixii ka dambeeyay 2010-kii.
“Waxaa jiray sharci soo baxay 2010 oo maamus u ogolaanayay madaxweyneyaasha, wuxuu khuseeya wixii 2010 ka dambeeyay uun, maalinka la saxeexa ayuu dhaqangal yahay, sharcigaas wuxuu khuseeyay Cabdi Maxamuud Cumar iyo aniga haddii la eego sharciga”
Wuxuu sheegay in sharcigan uu saxeexay madaxweynihii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar balse mid hadda hor yaalla xukuumaddiisa uu yahay mid waxyaabo laga baddalayo.
“Sharciga waxaa saxeexay Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuuna khuseeyay madaxweynayaasha imaanaya 2010 wixii ka dambeeyay, Madaxweynaha maamuskan mudanaya shuruudo buu leeyahay, midda koowaad, waa in uu shan sano dhameystaa, waxaa ku qoran waa in uu dambi galin,” ayuu yiri xilli Mustafe Muxumed oo wareysiinayay Dhab Tv.
Mustafe wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay diyaar u tahay inay dhaqan geliso maamuska loo sameynayo madaxweyneyaashii soo maray Dowlad Deegaanka balse xilliggan aanay mudneyn in lasoo hadal qaado arrintaas maadama ay gobolka si ba’an u saameysay abaarta.
“Wixii maamuus ah ee aan isla garanay ee ballan ahaa ee jiray sidiisii buu ahaanaya, ama qanuunkan meesha ku qoran ha u ogolaado ma yuusan u ogolaan, xukuumadda waxay xaq u leedahay inay iyadu go’aamiso tallaabooyin laisla meel dhigay oo dadkaa lagu maamusayo”.
Dhanka kale waxaa maalmahan jiray khilaaf siyaasadeed oo Jig Jiga ka taagnaa, iyada oo lasoo weriyay in ciidamo la geeyay goobo shacab, sidoo kalena warbaahinta gudaha ee Itoobiya ayaa tabisay warar ay kasoo xigatay madaxweyne Mustafe oo sheegaya in uu dhacay isku day afgembi.